SiteCatalyst 15 oo ka soo horjeedda Falanqaynta 10
Muuqaalka Muuqaalka Macluumaadka: Omniture vs Webtrends
Axad, Maarso 13, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan leenahay macaamiil adeegsada Omniture iyo Webtrends labadaba. Dabcan, haddii aad aqrisay balooggan, waad ogtahay in Webtrends uu yahay macmiil. Taasi waa shaac bixin buuxda oo laga yaabo inaan aragti un u xagliyo waxyaabaha… laakiin waxaan rajeynayaa in hal fiirinta isdhaafsiga isticmaaleyaasha cusub ee loo sameeyay nooc kasta waxay ku siin doontaa xoogaa cunto ah oo aad ku fikirto.
Horay baan u idhi dhibaatada inteeda badan Analytics dhufto ee loo yaqaan 'platform' waa inay caadi ahaan bixiyaan warbixinno, laakiin waxay la'yihiin awood ay muuqaal ahaan ugu soo bandhigaan macluumaadka si aad uga dhigto mid ku habboon go'aannada.
Halkan waxaa ah horumarkii ugu dambeeyay ee SiteCatalyst Goobta Omniture 15 badeecada sida loogu gudbiyey fiidiyowgoodii dhowaa.
Webtrends Analytics 10 waxay bixisaa UI cusub oo dareen sare leh, la safeeyey oo sahlan in la maro. UI waxaa loogu talagalay guji iyo taabashada isdhexgalka oo bixiya hab muuqaal ah oo aad u sarreeya oo lagu eego xogtaada. Isku xirka isticmaalaha wuxuu adeegsadaa thumbnails si uu u bixiyo sawirka hantida dijitaalka ah ee aad raadineyso.
Webtrends ayaa sidoo kale soo bandhigaysa goobaha - Boosku waa codsi kasta, degel internet, ama tusaale ahaan barxadda aad rabto inaad la socoto. Kani wuxuu noqon karaa boggaaga Facebook, degelkaaga, barnaamijkaaga Android, iwm. Meelaha si toos ah u abaabula astaamaha. Astaamaha waxay muddo dheer ahaayeen muuqaal weyn oo ku jira Webtrends, iyagoo siinaya dabacsanaan weyn, laakiin waxay ku timid qiime - abaabul. Hadda, astaamaha ayaa ku dhejinaya Meelaha.
Goorma John Lovett wuxuu arkay muuqaalka, wuxuu si fiican u dhigay… "Waxay umuuqataa Infographic!". Waxaan u maleynayaa inay taasi sheegeyso sheekada oo dhan… Falanqaynta Webtrends 10 wuxuu u xuubsiibtay warbixin ka baxsan wuxuuna hadda muuqaal ahaan u soo bandhigayaa macluumaad qaab awood u siinaya shirkadaha inay go'aan gaaraan.
Furan Meheradda: Blogging Corporate
Otomaatiga PPC: Erayo-fureedka Goon Duurjoogta ah
“Waxay umuuqataa qaab muuqaal ah” daruuri maahan amaan! 🙂
Sikastaba, dhinac isu dhigida waa markii iigu horeysay ee aan arko, waadna ku mahadsan tihiin.
Kumaa qiyaasi lahaa shan sano ka hor in stodgiest of stodgy (WT) uu ku guuleysan doono wax muuqaal muuqaal ah leh. Mar labaad, "muuqaal muuqaal ah" macnaheedu maahan ammaan.
Doug, waxaan rajeynayaa inaad kudarsan doontid labadan isdhexgal dheeri ah… fahmid, shaqeyn, dabacsanaan ayaa noqon doonta taxanaha aan jeclahay. Ama waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale sameeyo, haddii aan heli karo waqtiga. Sooo mashquulsan
Iyo, maadaama aad had iyo jeer si cad uga muuqato sharraxaaddaada, ma u malayn lahayd inaad wax badan ku dhex gasho meelaha 'Spaces' qoraal kale oo aad ku bixiso falcelintaada. Ama farta ku fiiq shay WebTrends ay daabacday oo macno u samaynaya.
Waan ka xumahay haddii aan u muuqdo mid riixaya, laakiin qoraaladaada iyo tabarucaadka kale runti way wanaagsan yihiin waana mudan yihiin, um, ka faa'iidaysasho.
CGrant, way fiicantahay inaad riixdo !!! Re: Infographic, oo aanad hubin meesha taasi ku noqon karto wax taban. Naqshadeynta macluumaadka waa muuqaal muuqaal ah oo labadaba isku daraya xogta oo si gaar ah u soo bandhigaya si ay u bixiyaan aragti u sheegeysa 'sheekada' si ka wanaagsan. U fiirso labada sawir ee kor ku xusan… Keebaa runti siiya aragti ku saabsan waxqabadka iyo bartilmaameedyada falcelinta gaarka u ah bogga su'aasha laga qabo?
Haa, aan isla helno isla qeexitaannada.
Run, macnaha aasaasiga ah ee infographic wuxuu kakooban yahay ujeedka sheekada sifiican. Si kastaba ha noqotee ereygu wuxuu sidoo kale macnahiisu yahay biyo-xireen kasta oo ka kooban midabyo, sawirro, eray daruur ah ama laba, cabbirka font ee kala duwan iyo midabada ku dhex jira qolka, oo lagu daray wax walba ma raacayaan shaashad fudud.
Waxa loogu yeero "infographics" maanta waxay ixasuusineysaa maalmihii hore ee daabacayaasha leysarka markii qof kastaa bilaabay naqshadeynta waraaqahooda u gaarka ah iyagoo adeegsanaya farshaxan gacmeedyo iyo xarfaha sida waalan, taasoo keentay cawaaqib xumo.
Markaa aan ku dhaganno nooca wanaagsan, sharafta leh ee sumadda infographic-ka ee ku lug leh khiyaanada iyadoo laga soo horjeedo jilicsanaanta ama isbeddellada.
Waan ku raacsanahay cgrant. Webtrends runti waqti badan ayey kuqaateen xalinta “miisaskoodii caadiga ahaa ee cabirkooda iyo cabirkoodu ahaa” arimaha muuqaalka ah ee Webtrends 8 iyo wixii kahoreeyay. Waad u sheegi kartaa inay diiradda saareen cusbooneysiinta muuqaalka muuqaalka maxaa yeelay labadoodaba sii-deyntoodii ugu dambeysay (9 iyo 10) waxay ahaayeen kuwo si aad ah diiradda loo saaray. Sure Webtrends 9 waxay soo bandhigtay astaamo dhoofinta xogta weyn (REST API, iwm) laakiin feker ahaanteyda, isbeddelka ugu weyni wuxuu ahaa isdhexgalka isticmaalaha.
Cusbooneysiintan ugu dambeysay ee Analytics 10 hubaal waa mid jinsi badan, waxaana rajeynayaa in wax qabad badan. Hal muuqaal oo dheeri ah oo lagu xusay Engage ayaa ah in Bog kasta oo ka mid ah warbixinta Bogagga ay ka heli doonaan dashboard u gaar ah - taasi waa inay noqotaa mid xiiso gaar ah leh, oo faa'iido leh!
Dabcan, Shir-weynihii Omniture toddobaadkan wuxuu diiradda saaray isbeddelada Webtrends aysan tixgelin tan iyo kahor… Version 6? Beddelaad madal-dhamaadka! U cusbooneysiinta SiteCatalyst 15 waxay la imaan doontaa jahwareer buuxa oo isbeddelo ah oo ka dambeeya muuqaalka. Isbeddeladani waxay u oggolaan doonaan dhammaan noocyada awooda cusub ee qalabka; awoodaha ay Webtrends kaliya ku riyoon karaan illaa iyo inta ay go'aansanayaan inay cusbooneysiiyaan Mashiinka Wax-qabadkooda.
Mid ka mid ah isbedeladan muhiimka ah - Qaybta degdegga ah. Hubso in Google Analytics ay haysatay in ka badan hal sano hadda, laakiin waa waqtigii qalabyada Ganacsi ay soo qaban lahaayeen. Iyada oo ku saleysan ogeysiisyada ka socda Engage usbuucii la soo dhaafay, uma muuqato in dhismaha duulimaadka ama qaybinta ay xitaa tixgelisay Webtrends. Ma dooneysaa inaad ku darto Qiyaas cusub warbixintaada? La xiriir Maamulahaaga, oo wali la shaqeynaya isla interface-kii uu la macaamilayay 4-5 sano ee la soo dhaafay! Kadib go'aanso inaad dib u falanqeyso ama kaliya ku dar warbixinnada horay u socda. Ku darista Qiyaasaha Omniture waa u fudud tahay guji-iyo-jiidid, waxayna u egtahay inay ku dhowdahay inay sii dabacsanaato - taas oo ay ugu wacan tahay hagaajinta dhamaadka-dhamaadka.
Liis buuxa oo dhameystiran oo ku saabsan hagaajinta Omniture ee SiteCatalyst ee Nooca 15, hubi maqaalka Adam Greco: http://adam.webanalyticsdemystified.com/2011/03/09/welcome-to-sitecatalyst-v15/
Xusuusnow, inaadan buug ku xukumin daboolkiisa. Sababtoo ah Webtrends waxay leedahay dashboard bog quruxsan oo dhaadheer macnaheedu maahan inay ka jilicsan tahay waxna lagu qaban karo.
Isdhaxgalka Bulshada iyo Moobaylka Webtrends? Hadda sh * t waa qabow!
Apr 9, 2011 at 12: 46 PM
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya webtrends iyo Omniture, waa sida xogta loo keydinayo. In Webtrends waxaad falanqeyn doontaa logfiles iyo macluumaadka warbixinta markaa waxaa lagu kaydiyaa faylalka duugga ah ee iskuulka.
Gudaha Omniture waxaad ku keydisaa xogta DB xiriir la leh. Labadan hab waxay labaduba leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido darro.
1. Webtrends waxaad dib u qiimeyn kartaa xogtaada. Tani waa mid waxtar badan u leh dhinacyo badan. Waad tijaabin kartaa dejintaada ama isbeddelada qaabeyntaada si fudud, waad dejin kartaa warbixinno cusub oo aad dib u arki kartaa waqtiga, haddii aysan ku dhisnayn xaddidaadyo gaar ah. Nooca caadiga ah waa soo gelitaan iyadoo la tixraacayo bogga, laakiin waxaa jira tusaalooyin tusaalooyin ah sababta ay tan u fududaanayso. Si kastaba ha noqotee maadaama Webtrends uusan ku shaqeyneynin DB xiriir ah, ma 'weydiin kartid' db ku noolaanshaha, wax alla wixii aad rabto. Waa inaad dhistaa warbixinta iyo falanqaynta xogta.
2. Omniture-ka waxaad ku noolaan kartaa "weydiin" xogta si toos ah, maxaa yeelay waxaad isticmaashaa DB xiriir ah. Tani waxay u oggolaaneysaa Discovery VS Site Galiye qaybsi toos ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaadan dib-u-qiimeyn karin xogtaada, markaa tijaabintu way adag tahay oo dhibaato ayaa kugu soo food leh adoo iskudayaya inaad cabirto walxaha waqtiga ku jira, oo aadan horay u dhigan. Sidoo kale DB-ga xiriirku wuxuu leeyahay xadkiisa sida ay u xajisan karto xogta badan ee ay qaban karto, sidaa darteed badanaa (oo anigu ma ahi khabiir Omniture ah, sidaa darteed ixtiraam) marka aan kor uga sii gudbo dhawr boqol oo kun oo booqasho, Omniture “muunad” xogta si looga fogaado weydiinta waalida ah jeer load. Tani dhibaato ayay leedahay marka aad rabto inaad hesho xogta saxda ah oo aan ahayn muunad xog ah. Qeybinta tooska ah si kastaba ha ahaatee RUNTA waa qabow waxaanan jeclaan lahaa Webtrends inay ugu yaraan ka dhigeyso suurtogal in la isticmaalo qaybaha ku jira falanqaynta Webtrends, marka la iibsanayo Qeybaha (La soco dhiggiisa Webtrends)
Asal ahaan, dhammaan qeybaha Live-ka runtii waa, waxay miirayaan warbixino ku saleysan liiska aqoonsiyada cookie. In kasta oo Webtrends Analytics aysan awood u lahayn inay si fudud ugu hirgeliyaan tan Falanqaynta 10, sababo la xiriira DB aan xiriir la lahayn, waxay si fudud u dhisi karaan awoodda adeegsiga qayb kasta oo isticmaale ka mid ah aaladooda "Qaybaha" sida shaandhada wixii warbixin ee Webtrends ah. Xaqiiqdii waad sameyn kartaa taas, laakiin waxay kaa dooneysaa inaad dhoofiso Segmentt-ka aad dooratay oo aad gacanta ku sameyso shaandho leh dhammaan aqoonsiyada cookie-ka ee ku jira una isticmaal sida shaandhada kaliya.
Marka, waxaa jira faa iidooyin iyo qasaarooyin labadaba. Waa dood xiiso leh, midkee doorbidaysa.
Apr 11, 2011 at 5: 18 PM
Ma hubo inaad ka warqabto waxa ku saabsan Webtrends Visitor Data Mart - waxay u beddeleysaa feylasha fidsan ee ka soo baxa 'Analytics' una beddesho xog-is-weydaarsi aad u adeegsan karto su'aalaha ad-hoc ama xitaa qeybta duulimaadka ee loo maro qeybta 'Segments interface'. Haddii aan isbarbar dhigi karo, waa waxqabad badan oo ka dabacsan qaybaha Google Analytics iyo Galiyeyaasha Site. Martida Xogta Martida waa "kudarid" falanqaynta sidaas darteed wali waxaad leedahay hal istcimaala isticmaale, hal maamul iwm. Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay sida ugu wanaagsan ee aad uga faa'iideysan karto faylalka fidsan ee loogu talagalay soo gudbinta (tusaale sanduuq malaha) iyo keydka macluumaadka xiriirka qaybinta iyo hawlaha kale ee “on-line” ka ah.
Apr 23, 2011 at 4: 39 PM
Waan ogahay VDM & Qaybaha si aad u wanaagsan, laakiin buundada dib ugu laabaneysa Analytics wali lama dhisin. Maanta ma daawan kartid tusaale ahaan xaaladahaaga beddelidda, falanqaynta dariiqaaga, ololahaaga hoos udhaca ama warbixin kale oo falanqeyn ah oo ku saabsan Webtrends Analytics ee Qeyb lagu qeexay Qaybaha & VDM.
Dhab ahaantii isku-dhafnaanta gaarka ah si fudud ayaa loo dhisi karaa, iyada oo si fudud loogu daro miirayaasha iyadoo lagu saleynayo liiska Aqoonsiyada cookie ee Qaybaha. Markaa aan u qaadanno inaad qayb ka dhistay VDM & Seegments. Qeybtu waa dhammaan booqdayaasha websaydhka bangiga oo leh mushahar sannadle ah oo ka badan 100.000 $ kuwaas oo horeyba u ahaa macmiil, laakiin aan haysan heshiis hawlgab oo kan gujiyey xayeysiis la xiriira hawlgab dheeraad ah 30-kii maalmood ee la soo dhaafay.
Waxaad dooneysaa inaad aragto bogagga Qeybtani doorbideyso, sida ay u dhex marayaan faahfaahinta macaamiisha filasha iyo meesha ay uga baxayaan iskuxirka bangiga websaydhka. Hadda, taasi macquul maahan. Waad dhisi kartaa Qeybta, laakiin uma isticmaali kartid Qeybtaas Falanqaynta sida shaandhada. Waxa kaliya ee aad runtii ubaahantahay waa qeybtaas gaar ah Aqoonsiyada cookie-ga ee laga dhoofiyey Qaybaha loona abuuray shaandhayn iyo voila, waxaad haysan lahayd warbixinnadaada.
Taasi waa muuqaalka ugu weyn ee aan ku dari lahaa, haddii aan go'aansan karo. Qeybaha wali waa shey la yaab leh oo si macquul ah u macquul ah. Laakiin waxaad ubaahantahay inaad awoodid inaad qeybta dib ugulaabato bartaada falanqaynta.
Marka, ku saabsan-fiican-ness. Sifiican u fiiriya midkasta, waxaan dhihi lahaa WebTrends nashqadeeyaashu waxay doorteen xulashooyin fiican oo ku saabsan waxa laga yeelayo shaashadan furitaanka opening inkasta oo wali la sii horumarin karo. Haddii aan kaliya heli lahaa shaashadan si aan ugu soo bandhigo maamulka, WebTrends-ka mid ayaa dejin lahaa wada-hadallo aad u wanaagsan oo keenaya su'aalo gaar ah oo dheeraad ah oo falanqeyn dheeraad ah.
WebTrends-ka mid ayaa sidoo kale si fudud uga dhigi kara aragti wanaagsan maamulka. Ma ku dhiiranayaa in qofkaaga isku celceliska ah ee maareynta ahi uu la dhacsan yahay is-dhexgallada isbeddellada sida ay u yihiin xog fiican?
Hmm, faalladayda labaad waxay soo bandhigeysaa kor ku xusan faalladayda ugu horreysa ee is-dhexgalkan. Waa in loo aqriyaa si hoose ilaa-sare.
Haddii ay jiraan hal shay oo aanad macquul ku eedeyn karin Webtrends, waa dabacsanaan la'aan. Had iyo jeer waxay ahayd aalad ugu dabacsan.
Waxaan u maleynayaa in Omniture ay lumineyso ATM.
Waxaad arki kartaa inbadan oo falanqaynta ah 10 on http://www.Webtrends.com/analytics10